Fifanarahana vaovao nohamafisin'ny mpiasan'ny hotely Pan Pacific Toronto
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Fifanarahana vaovao nohamafisin'ny mpiasan'ny hotely Pan Pacific Toronto
Ny mpikambana Unifor Local 112 tao amin'ny hotely Pan Pacific Toronto dia nanao fifanarahana vaovao tamin'ny mpampiasa tamin'ny 100 isan-jato.
"Unifor dia sendikan'ny Canada ho an'ny mpiasa mandray vahiny," hoy i Jerry Dias, filoham-pirenena Unifor. "Tena faly aho tamin'ny asa nataon'ny komity fifampiraharahana eo an-toerana 112 mba hahazoana fifanarahana matanjaka toy izany amin'izao fotoan-tsarotra izao."
Ny fifampiraharahana tamin'ny fitantanana trano fandraisam-bahiny dia henjana noho ny fandoavam-bola am-polony volana maro ho an'ny drafitry ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy ny mpiasa ao amin'ny hotely. Ny Unifor Local 112 dia nahomby tamin'ny fitsarana ara-dalàna nanome baiko ny hotely handoa $200,000 amin'ny fandoavana vola sy zanabola.
"Ny filazana fa ny areti-mandringana COVID-19 dia nanimba ny mpiasan'ny fandraisam-bahiny dia fanamafisana", hoy i John Turner, filoha 112 eo an-toerana. "Ny areti-mifindra dia naneho mazava ny maha-zava-dehibe ny mpiasan'ny hotely manana fiarovana ny sendika izay mitazona ny mpampiasa ho tompon'andraikitra."
Ny fifanarahana dia manitatra ny zon'ny mpikambana ao amin'ny sendika, anisan'izany ny zon'ny fampahatsiahivana mifandraika amin'ny areti-mifindra hatramin'ny volana martsa 2023, ny zon'ny fampahatsiahivana tsy misy fetra ho an'ny fandroahana mifandraika amin'ny fanavaozana, ary ny zon'ny fitadidiana 78 herinandro ho an'ny fandroahana hafa. Ary koa, ny fiteny fiarovana ny asa ho an'ny mpikambana dia nohamafisina tamin'ny fanoloran-tena tsy hamadika ny trano fandraisam-bahiny ho trano fandraisam-bahiny. Ny fifanarahana dia manolotra ihany koa ny toerana misy ny mpisolo vava an'ny mpitsara ara-drariny hanohana ireo mpiasa mainty, vazimba ary fanavakavahana.
Ny fanatsarana ara-toekarena fenon'ny fifanarahana dia ahitana ny fampiakarana ny karama, ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa ambony ho an'ny tombontsoa ara-pahasalamana sy ny fisotroan-dronono, sivy volana amin'ny fandrakofam-panafody ho an'ny fianakaviana voaroaka ho an'ny mpiasa manontolo andro, fanampin-tsakafo $5 isan'andro, ary ny tambin-karama ambony indrindra amin'ny fisotroan-dronono. ny sehatry ny hôtely any Toronto, voatazona. Nanaiky ihany koa ny mpampiasa ny fandaharam-potoana fandoavana ny vola sisa tavela amin'ny fandoavan'ny mpampiasa vola amin'ny drafitry ny fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny drafitry ny fisotroan-dronono.
Nohatsaraina ihany koa ny enta-mavesatry ny trano, anisan'izany ny tsy fahampian'ny ora ho an'ny mpiasan'ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny raha toa ka misafidy ny programa 'safidy maitso' tsy ara-drariny sy mampiahiahy amin'ny ho avy ny hotely. Ny mpiasan'ny Pan Pacific Room dia manadio efitrano tsy mihoatra ny 14 isan'andro.
“Noho ny firaisankinan'ny ekipan'ny fifampiraharahana sy ny firaisankinan'ny maha-mpikambana anay dia nahazo fifanarahana manome ny laharam-pahamehana ho an'ny mpikambana izahay”, hoy i Andrea Henry, Filohan'ny Vondrona 112 eo an-toerana ao amin'ny hotely Pan Pacific. "Efa nijaly tamin'ity areti-mifindra ity ny mpiasan'ny hotely, ary mirehareha aho fa nanao fiovana lehibe ho an'ny mpikambana izahay."
Unifor no sendika lehibe indrindra any Canada amin'ny sehatra tsy miankina, misolo tena ny mpiasa 315,000 isaky ny faritra lehibe amin'ny toekarena. Miaro ny mpiasa rehetra sy ny zony ny sendika, miady ho amin'ny fitoviana sy ny rariny ara-tsosialy any Canada sy any ivelany, ary ezahina hamorona fiovana mandroso ho amin'ny ho avy tsaratsara kokoa.